Power က V ကိုခါးပတ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM-bestindustrialbelt.com
Power က V ကိုခါးပတ်
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan Power က V ကိုခါးပတ် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 3V, 5V, 8V
ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ V ကို-ခါးပတ်
1)ရော်ဘာ impregnated ထည်အဖုံး
2)အားဖြည့် polyester ထားတင်းမာမှုအဖွဲ့ဝင်
DYNAFLEX®မိုးသည်းထန်စွာထုပ်-တာဝန်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ V ကို-ခါးပတ်အမေရိကန်နိုင်ငံစံ RMA အညီထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် DYNAFLEX ကဲ့သို့တူညီသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများရှိနေကြသည်®တုံးအ V ကို-ခါးပတ်.ခါးပတ်အမြင့်ဖို့ခါးပတ်၏ထိပ်အကျယ်များ၏အချိုး 1 န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်.1,အရာဂန္တ V ကိုထက်သုံးပုံတပုံကိုသေးငယ်-ခါးပတ်,ဒါကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အစွမ်းသတ္တိကိုပိုမိုကြီးမားဖြစ်လာ.အဆိုပါထည်အဖုံးအကြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီး wear နဲ့ကုသတာဖြစ်ပါတယ်-ခုခံရော်ဘာခြံဝင်း.ဒါကရေနံရန်ခါးပတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်စေသည်,ပူပြင်းခြင်းနှင့်အအေးအပူချိန်နှင့် antistatic.ဂန္တ V ကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ-ခါးပတ်,DYNAFLEX®ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ V ကို-ခါးပတ်ပိုကြီးတဲ့ဂီယာပါဝါ၏အားသာချက်များရှိ,ပိုမိုမြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ,အနိမ့်လမ်းပိုင်း,ထိရောက်မှုနဲ့ကြာကြာဝန်ဆောင်မှုဘဝကြီးမြန်နှုန်းမြင့်အချိုးအစားနှင့်အတိုစင်တာအကွာအဝေး၏ဂီယာလိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်.သူတို့ကကျယ်ပြန့်ရေနံအတွက်အသုံးပြုကြသည်,သတ္တုဗေဒ,ဓါတုဗေဒ,အထည်အလိပ်,ရုတ်သိမ်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestindustrialbelt.com/my/power-v-belt.html
စက်မှု V ကိုခါးပတ်
Power က V ကိုခါးပတ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် Power က V ကိုခါးပတ် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ OEM-ကျော် 51,528 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bestindustrialbelt.com
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestindustrialbelt.com/industrial-v-belt.html
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestindustrialbelt.com/oil-resistant-belt.html
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestindustrialbelt.com/sewing-machine-belt.html
မြင့်မားသောအပူချိန် V ကိုခါးပတ်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestindustrialbelt.com/high-temperature-v-belts.html
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestindustrialbelt.com/banded-belt.html
နှစ်ချက်ဖွဲ့ V ကိုခါးပတ်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestindustrialbelt.com/double-sided-v-belt.html
ကုန်ကြမ်း Edge V ကိုခါးပတ်
9.5, 13, 17
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestindustrialbelt.com/raw-edge-v-belt.html
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestindustrialbelt.com/cogged-belt.html
micro V ကိုခါးပတ်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestindustrialbelt.com/micro-v-belt-1.html